Mid kamid ah Wadooyinka ugu muhiimsan gobolka Hiiraan oo go’day – Banaadir Times
Waxaa hakad gala isku socodka dadka iyo Gaadiidka wadada xiriirisa Magaalooyinka Matabaan iyo Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan, kadib markii saacadihii la soo dhaafay ay dilal ka dhaceen.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa si kala gooni gooni ah laba Darawal ugu dilay inta u dhaxeysa Matabaan iyo Beledweyne, waxaana xalay sidoo kale gaari lagu rasaaseeyay wadadas ku dhintay hal Ruux halka mid kale uu ku dhaawacmay.
Saaka wararka aan ka helnay degmooyinka Matabaan iyo Beledwyen ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan inay istaageen Gaadiidkii u kala gooshi jiray labada Magaalo sababo amni dartood.
Dilalkii ka dhacay Gobolka Hiiraan 24-kii Saacadood ee la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay inay salka ku hayaan arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo dhowr jeer uga dhacay degaanbo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Dadka ku safra wadada xiriirisa degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne ayaa waxaa ay walaac xoogan ka muujinayan falalka amni darro ay kusoo kordhay wadadaas, iyaga oo ugu baaqay maamulada labada degmo inay wax ka qabtaan.
Hilib Yari ka jirta Magaalada Jigjiga & sababta oo la cadeeyay